प्रचण्ड र बाबुरामलाई मुद्दा की फुलमालाको स्वागत ? – Durbin Nepal News
प्रचण्ड र बाबुरामलाई मुद्दा की फुलमालाको स्वागत ?
अशोज ७, २०७५ १२:०० मा प्रकाशित
विद्या सागर योञ्जन
युद्ध अपराधीका रूपमा कार्यबाही हुने डरले प्रचण्डले माओवादी पार्टी एमालेमा बिलय गरे भने बाबुरामले त्यस अघि नै पार्टी परित्याग गरे । माओवादी पार्टी नै विसर्जन गर्दा पनि प्रचण्ड र बाबुरामले युद्ध अपराधबाट उन्मुक्ति पाउने कुनै गुन्जायस छैन ।
कम्बोडियाका पोलपोट , भियतनामका होचिमिन र रोमानियाका चाउचेस्कुले सत्ता टिकाउन नरसंहार गरे । त्यसपछि २१ औ शताब्दीमा कम्युनिस्टको नाममा नेपालमा १७ हजार जनता मारेर प्रचण्ड बाबुरामले नर संहारको नयाँ इतिहास रचे । नेपालको जन सङ्ख्याको हिसाबले माओवादी युद्धका नाममा नेपालमा भएको जनहत्या विश्वमै भयानक क्रूर मानिन्छ ।
युगोस्लाभियामा युद्ध अवधिमा क्रूर हत्या गरी मानव अधिकारको उल्लङ्घन गरे बापत तत्कालीन राष्ट्रपति Slobodan Milosevic गिरफ्तारीमा परे । उनले अन्तराट्रिय अदालत हेगको सामना गर्नु पर्‍यो। चिलीका सैनिक शासक अगष्टो पिनेचेतले जन निर्वाचित राष्ट्रपति एलेदा गोसैको सत्ता पलट गरी १७ वर्ष सैनिक शासन चलाए । तीस हजार भन्दा बडी मानिसको निर्मम हत्या गरे । पिनेचेतलाई गम्भीर अपराध र मानव अधिकार उल्लङ्घन गरे बापत बेलायत सरकारले बन्दी बनायो । पछि सन् २००० मा बेलायको जेलबाट मुक्त भए । त्यस पछि पनि चिल्लीमा उनी माथि थुप्रै मुद्दा दर्ता गरिए । मृत्यु पछि पनि ३०० भन्दा बढी हत्या र अपराध सम्बन्धी मुद्दा उनको नाममा अदालतमा छदैछन् ।
यी अन्तर्राष्ट्रिय युद्ध अपराधीहरू जस्तै भ्रष्टाचार र युद्ध अपराधहरूको अभियोगमा दण्डित हुनु नपरोस भन्नका लागि पार्टी परित्याग र बिलय गरेकै भरमा प्रचण्ड र बाबुरामले उन्मुक्ति पाउने सम्भावना छैन । जुनसुकै रूपमा उनीहरू अगाडि आए पनि फुलमालाले स्वागत गर्न सकिन्न । किनकि सयौँ निर्दोष मारिए । हज्जारौंलाई विना कसुर यातना दिइयो । फरक राजनीतिक बिचार राख्नेहरूले ज्यान जोगाउन समाज र परिवार छोडेर भाग्नु पर्‍यो । आफन्त गुमाउनेहरूका आँखाका आशु सुकेका छैनन् । यो दर्द र पिडा कसरी भुल्ने ?
विश्वकै सबै भन्दा बढी मानवाधिकार र स्वतन्त्रको वकालत गर्ने भूमि अमेरिकामा बस्नेहरूले पनि युद्ध अपराधी बाबुरामलाई स्वागत गर्नु भनेको हत्या र हत्यारालाई समर्थन गर्नु मात्र हो ।
प्रचण्ड र बाबुरामको राजनीतिक महत्वकांक्षाले धेरै आमाहरूका काख रित्तिए । थुप्रै चेलीहरूका सिँदुर पुछिए र हजारौँ बालबलिकाहरु टुहुरा भएका छन् । यी अपराध प्रचण्ड र बाबुराम कै नेतृत्वमा भएका थिए ।
माओवादी पार्टी नै वैचारिक हिसाबले विसर्जन वा परित्याग गर्नु भनेको उनीहरूले रोजेको बाटो सही थिएन भन्ने प्रमाण पनि हो । प्रचण्ड र बाबुरामले क्रान्तिका नाममा १७ हजार निर्दोष जनता मार्नुको औचित्य पुष्टि गर्ने अव त कुनै आधार पनि बाकी छैन । मार्न र मर्न प्रशिक्षण दिएका लडाकुका नाममा आएको अरबौँ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेर उनीहरूले अर्को कृति राखे । मानवता विरुद्धको युद्ध अपराध र भ्रस्टचारको यही अभियोगमा नेपालमै वा अन्तर्राष्ट्रिय युद्ध अपराध अदालत हेगमा मुद्दा दायर हुनसाथ थुनिनु पर्ने अवस्था आउन सक्छ । यो कुरा प्रचण्ड र बाबुरामले राम्रो सँग बुझेका छन् । त्यही भएर उनीहरू माओवादी छोडेर काँग्रेसको आड लिने वा पार्टीलाई नै एमालेको टागमुनी छिराउन पुगेका हुन् ।
जता-जता भागे पनि युद्ध अपराधमा यिनीहरूलाई एक दिन अदालतको कठघरामा उभ्याउने हामी माओवादी पीडितहरूको लक्ष छ । हाम्रो लक्ष पुरा नभए सम्म हामी विश्राम लिने छैनौ ।